News18 Nepal || खाडी मुलुकमा २ लाख ६० हजारमा कोरोना संक्रमण, कस्तो छ नेपालीको अवस्था ? - News18 Nepal
खाडी मुलुकमा २ लाख ६० हजारमा कोरोना संक्रमण, कस्तो छ नेपालीको अवस्था ?
काठमाडौं । लाखौं नेपालीहरु कार्यरत खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा कोरोना भाइरसले करिव २ लाख ६० हजार संक्रमित भएका छन् । कोरोना भाइरस सम्बन्धिको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिरहेको साइट वर्ल्डो मिटर्सले शुक्रबार विहान ११ बजेसम्म अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, ओमान, बहराइन र कुवेतमा २ लाख ५९ हजार ६९६ जना संक्रमित भएका छन् ।
ती मुलुकहरूमा अहिलेसम्म कोरोनाकै संक्रमणले १३६८ जनाको ज्यान गएको छ । ती मुलुकहरूमा संक्रमितमध्ये १ लाख ६२ हजार ९९६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । मलेसियासहित खाडी मुलुकमा भएको संक्रमणको अवस्था कस्तो छ त हेर्नुहोस् संक्रमित नेपालीको तथ्यांकसमेत समेटिएको देशगत विवरण ।
मलेसियामा कोरोना भाइरसको संक्रमणले ११५ जनाको ज्यान गएको छ भने ८ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । बिहिबार थप २७७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै त्यहाँ संक्रमित हुनेको संख्या ८ हजार २४७ पुगेको हो । संक्रमितमध्ये ६ हजार ५५९ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने १ हजार ५७३ जनाको उपचार भइरहेको छ । उपचारारतमध्ये ६ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको मेलेसियाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ बिहिबारसम्म ६७ जना नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये १३ जना निको भएका छन् भने ५४ जनाको उपचार भइरहेको छ । कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिने मलेसियाले जारी लकडाउनलाई ९ जुनसम्म पुर्‍याएको छ । मे ४ देखि लकडाउन खुकुलो बनाएर आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान बनाउँदै लगिएको मलेसियामा अप्ठ्यारो परेमा दूतावासमा वा दूतावासले अनलाईनमा उपलब्ध गराएको फारम भर्न नेपालीहरुलाई आह्वान गरिएको छ ।
खाडीका ६ राष्ट्रमध्ये साउदी अरवमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै ६११ जनाको ज्यान गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ थप ३२ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै एकै दिन १ हजार ९७५ जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा साउदीमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९३ हजार १५७ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ६८ हजार ९६५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने २३ हजार ५८१ को उपचार भइरहेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ १ हजार ३६४ जना नेपाली संक्रमित भएका छन् भने १३ जनाको ज्यान गएको साउदीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारी अन्त्य नहुने संकेत देखिएपछि साउदीले पनि क्रमिक रूपमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने योजना सार्वजनिक गरेको छ । झण्डै दुई महिनाको कर्फ्यू विभिन्न चरणमा विभाजन गरी २८ मेदेखि खुकुलो बनाइएको छ । पहिलो चरणमा मे २८ देखि ३० मेसम्म मक्का बाहेकका क्षेत्र र प्रान्तहरुबीचको आवागमनलाई बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म खुलाइएकोमा मे ३१ देखि मक्का बाहेकका क्षेत्र र प्रान्तहरुबीच बिहान ६ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म आउजाउ गर्न दिइन थालिएको छ । यो व्यवस्था जुन २० सम्म हुनेछ । यी दुवै चरणमा रेष्टुरेन्ट, फुड र बेभरेजहरु खुल्न दिइएको छ । अब तेस्रो चरण अर्थात जुन २१ पछि भने पार्लर, सैलुन, खेलकुद केन्द्रहरु, जिमहल लगायत खुला गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मृतक संख्याका आधारमा खाडीका ६ मुलुकमा कोरोनाको चपेटामा पर्ने दोस्रो मुलुक हो युएई । युएईमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणले २७३ जनाको ज्यान गएको छ । बुधबार थप ३ जनाको ज्यान गएपछि युएईमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या २७३ पुगेको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६५९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि युएईमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३७ हजार १८ पुगेको छ । त्यसमध्ये १९ हजार ५७२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
युएईमा अहिलेसम्म ५ सय नेपालीमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा १९ जनाको ज्यान गएको गैह्रआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले जनाएको छ । यूएईको दुबई सरकारले आर्थिक गतिविधि सुरु गर्ने घोषणा गरेसँगै दुबईमा जारी कर्फ्यूलाई राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्रै कायम गरेको छ । दुबईका विभिन्न सिनेमा हल, खेलकुद क्षेत्र, जीम हाउस, तथा क्लबहरु, थोक तथा होलसेल पसलहरु खुला भएका छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणले कुवेतमा २३६ जनाको ज्यान गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६ जनाको ज्यान गएको छ भने नयाँ संक्रमितको संख्या ५६२ छ । संक्रमित थपिएसँगै कुवेतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या २९ हजार ९२१ जना पुगेको छ । संक्रमितमध्ये १७ हजार २२३ जना उपचारपछि निको भएका छन् । एनआरएनएका अनुसार कुवेतमा संक्रमित हुने नेपालीको संख्या ६५० छ भने २ जनाको कोरोना संक्रमणले ज्यान लिएको छ ।
ओमानमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले ६७ जनाको ज्यान गएको छ भने १४ हजार ३१६ जना संक्रमित भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ७७८ जनामा संक्रमण देखिएको छ । संक्रमितमध्ये ३ हजार ४५१ जना उपचारपछि निको भएका छन् भने १० हजार ७९८ जनाको उपचार जारी छ । ओमानमा संक्रमितको राष्ट्रियता नखुलाइएकाले कति नेपाली संक्रमित भएका छन् भन्ने बारे केही पनि खुलेको छैन । ओमानले पनि मस्कट क्षेत्रको लकडाउन मे २९ देखि हटाएको छ । लकडाउन हटाएसँगै जनजीवन सामान्यउन्मुख हुँदै गएको छ । तर, कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै जाँदा त्रास भने कायमै छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणले कतारमा ४५ जनाको ज्यान गएको छ भने संक्रमितको संख्या ६३ हजार नाघेको छ । एकै दिन त्यहाँ १ हजार ५८१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या ६३ हजार ७४१ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ३९ हजार ४६८ जना निको भएका छन् भने २४ हजार २२८ जनाको उपचार भइरहेको छ । त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अहिलेसम्म कतारमा ६ हजार ९११ जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ४ जनाको ज्यान गएको छ । सरकारले कोरोनाका कारण बन्द भएका कम्पनीले श्रमिकको खाने बस्ने सुविधा कटाउन नपाउने नियम ल्याएकाले कतारमा कार्यरत नेपालीलाई खासै अप्ठ्यारो नपरेको दूतावासले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणले बहराइनमा २१ जनाको ज्यान गएको छ । त्यहाँ १३ हजार २९६ जना संक्रमित भएका छन् । संक्रमितमध्ये ७ हजार ७२८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने ५ हजार ५४७ जनाको उपचार जारी छ । बहराइनमा अहिलेसम्म ३३१ जना नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ त्यसमध्ये ३ जनाको ज्यान गएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि आफ्ना नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै बहराइनले ७ अप्रिलदेखि लागू हुने गरी सन् २०२० भरी नै अवैधानिक रुपमा बसेकालाई बहराइन छोड्ने अवसर दिएको छ ।
कोरोनाको महामारीले त्यहाँ १८ मार्चदेखि नै उडान बन्द गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीहरु रहेका खाडी मुलुकमा संक्रमण बढ्दै जादा उनीहरु चिन्तित हुन थालेका छन् । यद्यपि नेपाली सरकारले आजै शुक्रबार जुन ५ देखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि उद्धार सुरू गरेपछि नेपालीहरू स्वदेश फर्कन पाउने भएपछि उत्साहित भएका छन् ।